News - The iche iche nke ígwè Ọdịdị ihe
Steeti Arbon-manganese: Ihe ndị mejupụtara kemịkal bụ iron, carbon, na manganese. A na-akpọkarị ihe ndị a obere steels ma ọ bụ carbon carbon. Ike na ductility dị elu, yana ịbụ akụnụba na-ejikwa ya eme ihe. Otu a ma ama n'etiti ụdị a bụ ASTM ọkwa A36.
A kọwapụtara ụdị ndị ahụ n'ọtụtụ ụkpụrụ edepụtara n'ụwa niile, yana ọtụtụ ndị ọkachamara na ngalaba ndị nwere ikike dịkwa.
Ngwongwo igwe nchara, n'okwu a ejiri kwado osisi joists n'ime ulo.
I-beam (nke kpụrụ m - na Britain ndị a gụnyere Universal Beams (UB) na Universal Columns (UC); na Europe ọ gụnyere IPE, HE, HL, HD na ngalaba ndị ọzọ; na US ọ gụnyere Wide Flange (WF ma ọ bụ W-Shape) na H ngalaba)
Z-Shape (ọkara Flange na ntụziaka ndị ọzọ)
HSS-Shape (Oghere oghere nke a makwaara dị ka SHS (akụkụ oghere oghere) yana gụnyere akụkụ anọ, akụkụ anọ, okirikiri (ọkpọkọ) na akụkụ obe elliptical)
N'akuku (-dị akụkụ L)
Ọwa ụlọ, ma ọ bụ C-beam, ma ọ bụ C-cross-section
Ịkụ gọlfụ (akụkụ T-akụkụ)
Rail profaịlụ (asymmetrical I-beam)
Iggbọ okporo ígwè Vignoles
Flanged T okporo ígwè
Ogwe, ogologo ogologo nke nwere akụkụ akụkụ akụkụ anọ, mana ọ bụghị obosara ka akpọọ ya mpempe akwụkwọ.
Mkpanaka, akụkụ gbara gburugburu ma ọ bụ akụkụ anọ ogologo ma e jiri ya tụnyere obosara ya; hụkwa rebar na dowel.
Efere, akwa mpempe akwụkwọ karịa karịa 6 mm ma ọ bụ 1⁄4 na.
Ọ bụ ezie na a na-eme ọtụtụ ngalaba site na ịpịgharị ọkụ ma ọ bụ oyi, a na-eme ndị ọzọ site na ịgbado ọkụ ọnụ ma ọ bụ na-ehulata ala (dịka ọmụmaatụ, akụkụ okirikiri kachasị na-arụ site na mbadamba mbadamba gbagọrọ agbagọ na gburugburu na-agbanye)
Okwu ndị a na-akpọ iron iron, iron channel, na ígwè mpempe akwụkwọ abụwo ihe a na-ejikarị eme ihe ebe ọ bụ na tupu e jiri ígwè dochie ígwè arụ ọrụ. Ha ebirila ndụ mgbe oge azụmaahịa a rụchara igwe na ka na-anụ mgbe ụfọdụ taa, na nzuzo, maka mkpịsị ụkwụ akwara, ngwongwo ọwa, na mpempe akwụkwọ, n'agbanyeghị na ha bụ ndị na-amaghị aha (tụlee "tin foil", a na-ejikarị ya eme ihe aluminom foil). Na ederede ederede maka ọnọdụ ọrụ igwe, a na-eji okwu ziri ezi dị ka ngwaahịa nkuku, ngwaahịa mmiri, na mpempe akwụkwọ.